HacksDirect | Fumana hacks yakho umdlalo
EyeDwarha 19, 2017 Akohlulwanga
Kuye iinyanga ezimbalwa, kwaye le app ekuhlaleni igama "Sarahah" sele kusetyenziswa isiqingatha kwexesha yabantu esichithwe media loluntu. Oku liye laba 'shushu isihloko' wonke umntu omtsha uthetha nokusebenzisa ngexesha elifanayo. Ngoko ke yintoni ngokwenene Sarahah? Kuyinto isicelo ekuvumela ukuthumela imiyalezo engaziwa kubasebenzisi bayo, yaye into elungileyo ngalo oku ukuba akunyanzelekanga ukuba babhalise ngokwakho kuyo ukuba babe nako ukuthumela imiyalezo. Ukuba ngaba akukho mood ukuzamkela, thumela nje ngaphandle kokuba ukubhalisa; oku ngokuqinisekileyo kuthatha ixesha elininzi umthwalo bamagxa wonke.
Le app ilula ukusebenza. Konke kufuneka uyenze uwulandela Android yakho okanye iOS uze uqalise. Ukuba ufuna kakhulu ukufumana imiyalezo ke loo, kuya kufuneka ukuba babhalise ngokwakho le app ngokunika iinkcukacha ezifana negama kunye nedilesi ye email. Kukho kwakhona website ukuba ungakwazi ukungena, nje xa kunokwenzeka awunayo ifowuni yakho, ukuze ubone ukuba ufumana ntoni imiyalezo. Le app kubonakala ngathi enye umdla ingakumbi phakathi elivisayo kuba abakwazi babonakala ukuba basuke kunini kungekudala.
Xa abantu banikwa ithuba lokuba ndithethe into umntu ngaphandle kokuba loo mntu ukuba ungubani yabo, bona abafane ukuya phezu ibhodi. Kangangoko oku kuye umdla, kuba ukwazi kancinci omnye umntu azi ukuba ngubani na uthumela bonke abo imiyalezo. Ufuna ukuba ngubani oye oyithandayo yakho eyimfihlo lonke eli xesha okanye enye indlela ngeenxa. Ubuya kuziva njani xa ufuna ukwazi ukuba ekugqibeleni kukho into enokukunceda ukwambula lawo amagama? pretty nevuso, kunene? Kulungile ke, yanxitywa wena ngoba into esinayo isicwangciso kuba kuni aba uya mpela ukumcim 'ukuba umdla wakho.
I Sarahah ibonisa isixhobo na uhlobo lomnqweno yimfumba kule app ekuvumela ukuba ufumanise amagama kunye yesazisi abo ngokuthumela ezo imiyalezo engaziwa kuwe. Unenkqubo nokubonwa apho kulandelelwa idilesi ye IP lomsebenzisi, kwaye ngoko ke iinkcukacha ezifanelekileyo ezifana negama kunye nedilesi ye email zithiwe thaca kwi indawo enye. Isixhobo ayikho nangayiphi na indlela mthethweni, ngoko akuyomfuneko ukuba sikhathazeke ukuyisebenzisa. Kuyinto nje apho ukwenza ubomi bakho ukwazi ngaphantsi kancinane.
Le kubanokwenzeka kutyhila isixhobo akupheli. Ngoku into onayo ithuba lokwazi oko abantu emsebenzini bakho bacinga ngawe okanye umnxeba ukuba abantu abahlobo bakho ngokwenene abahlobo bakho okanye. Isibhakabhaka kumda le sixhobo; oko nje abantu ukwazi ngayo kwaye uyeke ukusebenzisa le app Sarahah kwi ndawo yokuqala. ke, kuze oko kwenzeka, usebenzise ithuba lakho ukuphendula yonke loo mibuzo entlokweni yakho Sarahah yethu ityhila isixhobo.
EyoMsintsi 2, 2017 Akohlulwanga
Wonke Hayibo fan angathanda ukuba ukudlala hayibo iiyure ezininzi kangangoko ufuna. Kukho iindawo abonelela ukuba badlala intenetya kunye nabahlobo bakho kunye noogxa. kunjalo, kuya kufuneka ukuba ushiye indlu yakho ukuze ukuya kwezo ndawo. Umdlalo Hayibo kuya kufuneka kwakhona ukuba ukufumana ixesha elisecaleni ukuba abe kunye nabahlobo bakho.
Roblox ngumdlalo odlalwa abaninzi apho imisebenzi yakho avatar nge oko ihlabathi aqokelele nezixhobo ezahlukeneyo.
gta 5 ngumdlalo ngokupheleleyo amanyathelo apho abadlali kufuneka bagqibe imisebenzi yazo. Kuba indlela lula ukugqiba umsebenzi, abadlali kufuneka babe nezixhobo ezininzi ezifana imipu, ezimotweni, iigaraji, etc.
8 ball pool ke imvakalelo xa kuziwa imidlalo. Kulo mdlalo, uyakwazi ukudlala imidlalo ibhola pool.
Free PSN codes akukho yeesaveyi okanye Ukopisho
Zonke nabadlala kufuneka ahlawule zonke umxholo non-free on ivenkile PSN nokuba credit cards okanye amakhadi inethiwekhi PlayStation.
shadow ukulwa 2 my zemali unlimited online
shadow Fight 2 ngumdlalo fantastic ne imizobo emangalisayo kunye ubuhle emiselwe Japan. Umdlali ulwa iintshaba ezahlukeneyo usebenzisa i desktop.
Free akhawunti PayPal ngemali mda
PayPal isetyenziswa ngokubanzi intengiselwano yemali. ikakhulu, ukuba uthenga okanye bethengisa into aphesheya kwaye online; PayPal imin ye intengiselwano kuwe.
Free Instagram Abalandeli my online Download
Instagram kuyinto isicelo ngokuqhubekayo zithanda. Isicelo isetyenziselwa ukulayisha imifanekiso. Esi sicelo inikeza amacebo ezahlukeneyo kunye nezixhobo nokuhlela apho ukutsala kabukhali imifanekiso zakho ukuba ngcono.
« izithuba abadala